पहिलो पटक प्रधानसेनाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कति छ प्रधानसेनापतिको सम्पत्ती ? (विवरणसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पहिलो पटक प्रधानसेनाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कति छ प्रधानसेनापतिको सम्पत्ती ? (विवरणसहित)
पहिलो पटक प्रधानसेनाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कति छ प्रधानसेनापतिको सम्पत्ती ? (विवरणसहित)
भदौ २४ गते, २०७६ - १७:१८
काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मंगलबार नेपाली सेनाको वेबसाइटमार्फत उनले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छन्। सेनाका सबै रथी र अधिकृतले सम्पत्ती विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानअन्तर्गत थापाले आज आफ्नो सम्पत्ती विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रधानसेनापतिका रुपमा आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने थापा पहिलो हुन् । यसअघि सेनाभित्र कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन ।
कति छ प्रधानसेनापतिको सम्पत्ती ?
नेपाली सेनाको वेभसाईटमा सार्वजनिक गरिएको प्रधानसेनापतिको सम्पत्ती विवरण अनुसार थापाको नाममा काठमाडौं, लम्जुङ, नवलपरासीलगायतका स्थानमा जग्गा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै ५५ तोला सुन, ५९० तोला चाँदी र १० लाख बराबरको हिराको हार र औंठी रहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यो श्रीमती दिपा थापा र छोरी रुरु थापाको नाममा रहेको उनले सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरणमा छ।
थापाले केही बैंक, वित्तीय संस्थामा नगद, धितोपत्र र शेयर समेत रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो केही ऋण रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।
वेभसाईटमा सार्वजनिक गरिएको प्रधानसेनापतिको सम्पत्ती विवरण यस्ताे
भदौ २४ गते, २०७६ - १७:१८ मा प्रकाशित